JUNE&MAY: October 2010
June,May @ Universal Studio
မနေ့က universal studio ကိုသွားတယ်။သောကြာ၊စနေ ဆို ည၇နာရီနောက်ပိုင်း ၀င်ကြေး ၅ ကျပ်ပဲ။အကုန်တော့ဝင်လို့ မရဘူး၊ဟောလိဝုဒ်ရယ်၊၉း၃၀မှာ မီးပန်းပြပွဲ တစ်ခုရယ်။တန်တော့တန်တယ်။
ဓာတ်ပုံမရိုတ်တာကြာလို့ သားလေးကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးခဲ့တယ်။
MRT ကနေ VIVOCITY ထဲအ၀င်နေရာမှာ။
universal studio နားမှာ ကမ္ဘာလုံးကြီးနောက်ခံနဲ့။
ဝင်ကလေး နဲ့ မေကလေး။
ဒီလိုအရိုးခြောက်ကို ကြိုးဆွဲပြီင်္းချထားတဲ့ အပင်လဲတွေ့ခဲ့တယ်။
ဒီနေရာက ၇၆ကျပ် သမားတွေပဲနေ့ဖက် ၀င်လို့ရတာ။
Posted by JuneOne at 2:24 PM 11 comments Links to this post
၇ယ်မောစရာ Intelligent Students - School Fun.
Forward Mail ထဲကရတာပါ။အောက်မှာတော့ This Mail is sent byaMember of FunAndFun တဲ့။
အိမ်ကလူ နဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဖတ်ပြီးရီလိုက်ရတာ။ပြီးတော့ သူကပြောတယ် နင့်သားလေး အဲလိုဖြစ်နေရင်
ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့။အဲလောက်တောင် ဆိုးနေ၊တုံးနေရင် ငါကျောင်းထုတ်လိုက်မယ် လို့ တို့ကပြန်ပြောတော့
....အံမယ် သူက ဒီလိုသူများမတွေးတဲ့ ဘက်တွေးတဲ့သူမှတော်တာဆိုပဲ။ကြီးလာရင်အဖေနဲ့ သားနဲ့တော့
ဟုတ်အုံးမယ်။သူ သိပ်အလိုလိုက်တယ် သူ့သားကို။တစ်စက်မှ မဆူဘူး။အဲဒါကြောင့်မနေ့ကသားအဖ ၂ယောက်
CCk သွားကြတာ တစ်လမ်းလုံး ချီခိုင်းထားတယ်တဲ့။ကောင်းတယ် ဝမ်းသာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တယ
တို့ကိုဆို တစ်ခါမှ မချီခိုင်းဘူး။ဟိုလက oversea သွားတော့ လေဆိပ်ကနေ sms ပို့တယ်...
'please be patient to my son.I dont want to hurt his heart.
I can understand his feeling coz he is the eldest and i also the eldest too'.....တဲ့။
Posted by JuneOne at 3:00 PM3comments Links to this post
မနက်စာက ခေါက်ဆွဲသုတ်၊နေ့လည်စာ ဘူးသီးဟင်းနဲ့ ငါးကြော်းးး၊ညစာကတော့ အောက်ပါပုံတွေအတိုင်းးးးးးး
ဘဲကင် ကို ကင်မရာထဲကကူးဖို့မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ပျင်းသွားပြီ မကော်ပီတော့ဘူး။
လက်ဆောင်ရတဲ့ BD ကိတ်ပါ။
အင်းးးးဘာလိုလိုနဲ့ ၃၀ ကျော် ၄၀ထဲ ရောက်ပြီပဲ။အမှန်ကိုလက်မခံချင်ဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Posted by JuneOne at 11:36 PM 11 comments Links to this post